Leadership Gold | Breakthrough
“ရွှေကဲ့သို့ အဖိုးထိုက်တန်သော ခေါင်းဆောင်မှု အယူအဆများ”
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းရဲ့ အောင်မြင်မှု၊ လူတစ်ယောက်ချင်းရဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် ခေါင်းဆောင်မှုရဲ့ အရေးကြီးပုံကို သိတဲ့ လူအများလိုပဲ သင်လည်း တကယ်တော့ ဒါကို စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် အဲဒါဟာ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
သင်ဟာ လူတွေကို ဦးဆောင်နေရတဲ့ အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်လား။
ဒါမှမဟုတ် သင်ဟာ လူတွေအများကြီးကို ဦးဆောင်ရတဲ့ အထက်အရာရှိတစ်ယောက်လား။
မဟုတ်ရင် သင်ဟာ လူပေါင်းများစွာကို ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ လက်တွေ့ဆန်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ ရချင်သူလား။
သင်ဟာ ဘဝကို အနှစ်သာရရှိရှိ အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ဖြတ်သန်းလိုသူလား။
ပြီးတော့ သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ သင့်နောက်လိုက်တွေအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှု ရှိပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ကို လက်တွေ့ကျကျ ဖန်တီးဖို့ကိုရော သင် စိတ်ဝင်စားတယ် မဟုတ်လား။
အရေးယူမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်စရာမလိုပဲ သင်ပြောရင် ပြောတဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်တဲ့ နောက်လိုက်တွေလည်း ရှိချင်မှာပဲ မဟုတ်လား။
ပြီးရင် သင့်မှာ သင့်ကိုယ်စား ဦးဆောင်မှုပေးမယ့် ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်း လက်တွေ့ကျကျ မွေးထုတ်ထားချင်တယ် မဟုတ်လား။
ဒါတွေ အားလုံးက သင့်ခေါင်းထဲမှာ အခုတွေးသလို အရင်ကတည်းက တွေးနေတာ ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ မေးခွန်းတွေ ဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်။
အခု သင်စဉ်းစားတာတွေဟာ တကယ်ကို ဖြစ်လာနိုင်ပါပြီ။
အကယ်၍ သင်ဟာ ခေါင်းဆောင်မှုကို လက်တွေ့ကျကျ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လိုသူဆိုရင် ဒီအစီအစဉ်ဟာ သင့်အတွက် ဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ တွေ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သော ခေါင်းဆောင်များကို ကြည်ညိုလေးစားကြတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုများဟာ သူတို့ကြောင့်သာဖြစ်ပြီး အခြားသူများဆီကနေ သူတို့ရရှိတဲ့ အကူအညီများနဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့တွေ ယူဆတတ်ကြတယ်။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် တကယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ အားလုံးလက်ခံထားကြသလိုပဲ ဘယ်ခေါင်းဆောင်မှ သူရဲ့ အဖွဲ့သားများရဲ့ အထောက်အပံ့နဲ့ အကူအညီမပါဝင်ပဲ ကြီးကျယ်တဲ့ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သင့်လူတွေက သင့်နောက်ကို လိုက်မလာမချင်း ရှေ့ကို ဘယ်လိုမှ ရောက်မသွားနိုင်ပါဘူး။
သင်သိထားတဲ့အတိုင်း ခေါင်းဆောင်မှု အရည်အသွေး တိုးတက်မှု (Leadership Development) နှင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (Personal Growth) များဟာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းစီ နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သောအရာများ ဖြစ်ပါတယ်။
အရာအားလုံးဟာ ခေါင်းဆောင်မှုအပေါ်မှာ မူတည်၍ မြင့်တက်ကြ၊ နိမ့်ကျကြပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် သင့်လုပ်ငန်း၊ သင့်အလုပ်အကိုင်နဲ့ သင့်ဘဝအတွက် ခေါင်းဆောင်မှု အတွေးအမြင်သစ်တွေကို ရရှိတာဟာ ရွှေတူးတာလိုပါပဲ။
ဒါပေမယ့် သင့်ဘဝနဲ့ ရင်းပြီး ရွှေနဲ့ တူတဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု အတွေးအမြင်တွေကို ရှာစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
U Naing Win Aung (Executive & Business Coach) ဦးစီးသော Breakthrough Company Limited မှ ပြုလုပ်မည့် Leadership Gold (2 Days Advanced Leadership Development Program) မှာ တက်ပြီး သင်ဖြစ်ချင်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်လာအောင် လက်တွေ့ကျကျ တိုးတက်လာအောင် လေ့လာလို့ရပါတယ်။
Leadership Gold အစီအစဉ် မှာ John C. Maxwell ရဲ့ နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော် လေ့လာခဲ့ပြီး သူမ ျှဝေခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု အကြောင်းတွေ အပြည့်အစုံ ပါဝင်ပါတယ်။
Leadership Gold မှာ သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး ခေါင်းဆောင်မှုအယူအဆတွေ ပါစေချင်တဲ့အတွက် ဒါကို ပြုစုဖို့ အသက်ခြောက်ဆယ်ကျော်တဲ့အထိ စောင့်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
World Number One Leadership Expert John C. Maxwell အနေနဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ သူရွှေတုံးလေးတွေကို တူးထားပြီးပါပြီတဲ့။ ဒီရွှေတုံးလေးတွေတစ်ခုချင်းဟာ အခန်း ၂၆ ခန်းမှာပါတဲ့ အခန်းတစ်ခန်းစီပါပဲလို့ ပြောပါတယ်။
သင်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်း စစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် ဖြစ်လာစေမယ့် နည်းလမ်းများကို လက်တွေ့ကျကျ သင်ယူနိုင်မယ့် အစီအစဉ်များကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပါဝင်မည့် ခေါင်းစဉ်များထဲမှ အချို့မှာ
ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းဆောင်ဖို့ အခက်ဆုံးလူတစ်ယောက်ဟာ အမြဲတမ်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။
ကိုယ့်ဘဝမှာ အလုပ်တစ်ရက်တောင် မလုပ်ပါနဲ့။ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ် Passion ရှိတဲ့ အရာကိုပဲ လုပ်ပါ။ ဝါသနာပါတာလုပ်နေပြီဆိုရင် သင့်ဘဝမှာ တစ်ရက်တောင် အလုပ်လုပ်နေရသလို မခံစားရတော့ပါဘူး။
အကောင်းဆုံး ခေါင်းဆောင်တွေ ဆိုတာ နားထောင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်တယ်။
သင့်ရဲ့ ဘဲတွေကို လင်းယုန်ငှက်တွေရဲ့ ကျောင်းကို မပို့ပါနဲ့။ ဘဲတွေမှာ ဘာအားသာချက်တွေ ရှိလဲ။ လင်းယုန်ငှက်တွေမှာရော ဘာအားသာချက်တွေ ရှိလဲ။
ခေါင်းဆောင်ဆိုတာက လူတွေကို သူ့နေရာနဲ့ သူနေရာ ချရမယ်။
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်မေးတဲ့မေးခွန်းများရဲ့ အဖြေများကိုပဲ ရပါမယ်။
စတာတွေ အပါအဝင် Chapter ပေါင်း ၂၆ ခန်းပါဝင်ပါတယ်။
* Business Owner များ
* Department Head များ
* Top & Middle Managers
* အတွေ့အကြုံရှိပြီး ဖြစ်သော Supervisor များ
ယခုအစီအစဉ်ကို တက်ရောက်ခြင်းဖြင့် သင်ရရှိမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ
- အဖွဲ့အစည်းအတွင်းတွင် အထီးကျန်သော ခေါင်းဆောင်မဖြစ်အောင် မည်သို့လုပ်ရမည်ကို သိရှိလာမည်။
- သင့်ကိုယ်သင် မည်သို့ဦးဆောင်ရမည်ကို သိရှိလာမည်။
- သင့်ဘဝအတွက် အဆုံးအဖြတ်ပေးမည့်ကာလများတွင် မည်သို့ ရပ်တည်သင့်သည်ကို သိရှိလာမည်။
- အများ၏ ဝေဖန်မှုကို မည်သို့ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရမည်ကို သိရှိလာမည်။
- အလုပ်ကို ထိထိရောက်ရောက် မည်သို့လုပ်သင့်သည်ကို သိရှိလာမည်။
- ဝန်ထမ်းကောင်းများ သင့်အဖွဲ့အစည်းကနေ နှုတ်ထွက်ရသည့်အကြောင်းရင်းများကို သိရှိပြီး မည်သို့လုပ်ဆောင်သင့်သည်ကို သုံးသပ်လာနိုင်မည်။
- ရလာဒ်ကောင်းသော အစည်းအဝေးတစ်ခုအတွက် မည်သို့ပြင်ဆင်သင့်သည်ကို သိရှိလာမည်။
- လူအများ အမှန်တကယ်လေးစားသော ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင် မည်သို့လုပ်ဆောင်သင့်သည်ကို သိရှိလာမည်။
- သင့်လက်အောက်တွင် ခန့်ထားမည့် ခေါင်းဆောင်များကို မည်သို့ရွေးချယ်စီစစ်သင့်သည်ကို သိရှိလာမည့်အပြင် များစွာသော ခေါင်းဆောင်မှုသင်ခန်းစာများ ပါဝင်ပါသည်။
ထိုသို့သော ခေါင်းဆောင်မှုသင်ခန်းစာများကို လေ့လာပြီး အမှန်တကယ်အသုံးချခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ပိုမိုတိုးတက်လာခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ပိုမိုတိုးတက်လာခြင်း၊ လူအများနှင့် အဆင်ပြေသောကြောင့် စိတ်ချမ်းသာလာခြင်း၊ ဘဝတွင် ပို၍ ပျော်ရွှင်ပြီး အနှစ်သာရရှိရှိ နေထိုင်လာနိုင်ခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ရရှိပါမည်။
ထူးခြားချက်မှာ ထိုသင်ခန်းစာများကို စာသင်သလို သင်ခြင်းမဟုတ်ပဲ Coaching နည်းလမ်းများပါ အသုံးပြု၍ ထည့်သွင်းသင်ကြားခြင်းကြောင့် ယခုအစီအစဉ်သည် ဗဟုသုတရသော်လည်း လက်တွေ့ အသုံးချရန် မလွယ်ကူသည့်သင်တန်းမျိုး မဟုတ်ပဲ သင့်လုပ်ငန်း၊ အလုပ်အကိုင်တိုးတက်အောင် အမှန်တကယ်အသုံးချနိုင်သည့် Action Plan များပါ သင်ကိုယ်တိုင် ရရှိလာပါလိမ့်မည်။
Leadership Gold Program ကို တက်ရောက်ခဲ့သောသူများ၏ စကားများ
ကျွန်တော်တို့ဟာ အမြင့်ကို တစ်ယောက်တည်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာမှ တစ်ယောက် တည်း အကြာကြီးမနေချင်ကြပါဘူး။ အောင်မြင်မှုကြီးကြီးကိုလည်း တစ်ယောက်ထဲ ရယူနိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါတွေ ကြောင့် အဖွဲ့အစည်းတွေ လိုပါတယ်။ ဒီထက်တိကျအောင် ပြောရရင် ခေါင်းဆောင်တွေ အများကြီး ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းလိုပါတယ်။ ဒါတွေအတွက် leadership gold ဟာ အဓိက ပံ့ပိုးမှုနေရာမှာ ရှိမှာပါ။ အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ အကောင်းဆုံးအထောက်အပံ့နဲ့တော့ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်မှု တွေလိုပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ဟာ အကောင်းဆုံးအထောက်အပံ့ဖြစ်ပြီးတော့ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုတော့ ကိုယ်တိုင် လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Ko Aung Zaw Zaw Tun
Trust Net Solutions Co., Ltd.
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မှာ ရှိရမည့် အရည်အချင်းတွေ လိုအပ်ချက်တွေ သိလာတယ်။ လူတွေကို ဘယ်လို ဆက်ဆံရမလဲ၊ လူတွေနဲ့ ဘယ်လို အဆင်ပြေအောင် နေနိုင်မလဲ၊ လုပ်ငန်းမှာ ဘာတွေမှားနေသလဲ၊ ဘာတွေ လုပ်သင့်သလဲ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားတွေ ပြောင်းလဲလာတယ်။
Ko Than Oo
Leadership Gold is better than 21 Laws. If someone who finished 21 Laws, there may get better idea in doing Leadership Gold action plan.
Ma Haymun Oo
ကိုယ်တိုင် စဖြစ်ချင်စိတ် တဖွားဖွား ပေါက်လာပါတယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် 100% Responsibility ရှိလာပါတယ်။
U Maung Maung Hla
Shwe Naing Ngan Print Group
ဘဝတစ်ခုလုံးစာ အတွေးအမြင်ထိ စဉ်းစားတွေးခေါ်စရာတွေ ရခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မေးစရာ powerful question တွေ ရရှိလာတယ်။ ကိုယ်တစ်ခါမှ မစဉ်းစားဖူးတဲ့ title တွေ ထွက်လာတယ်။ ကိုနိုင်ဝင်းအောင်ရဲ့ သင်ကြားပြသမှုကောင်းတာလည်း ချီးကျူး၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Ma Kyi Thar Aye
Leadership Gold Program သည် Leadership ability ၏ အနှစ်ချုပ် အနှစ်သာရများကို ဖော်ပြပေး ထား သောကြောင့် အရမ်းကောင်းပါတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင်မိမိရဲ့ ဘဝမှာ အမှန်တကယ် တိုးတက်အောင် အသုံးချ နိုင်တာကြောင့် leader ဟု ခံယူထားသော ခေါင်းဆောင်များ သိသင့်ပါ တယ်လို့ အကြံပြုပါတယ်။ ဒီ program ကို တက်ရောက်၍ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း ပိုမို breakthrough ဖြစ်လာပါတယ်။ ထို့အပြင်အောင်မြင်တဲ့ track အောင်မြင်မှု များရရှိ ထားတဲ့ ကိုနိုင်ဝင်းအောင်ရဲ့ စေတနာပါပါ သူ့ရဲ့ ကြုံတွေ့လာရတဲ့ ဘဝအတွေ့အကြုံ များကို ဝေမျှပေးခြင်းဖြင့် အတွေ့အကြုံအသစ်များကို ရရှိစေပါတယ်။
Ko Zayar Phyo
Techno Vision Co., Ltd.